IIAPARTMENTI ZOKUBONA ULWANDLE - I-Airbnb
IIAPARTMENTI ZOKUBONA ULWANDLE
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguIrini
Umgangatho wesibini kwigumbi lokulala elineembono ezimangalisayo zolwandle. Iindwendwe zingonwabela owona mbala uluhlaza okwesibhakabhaka wokugqibela wolwandle kunye nesibhakabhaka ukusuka kwibalcony ethandekayo.
Yindlu enamagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlambela. Kwigumbi elinye lokulala kukho ibhedi ephindwe kabini kwaye kwelinye igumbi lokulala ezimbini iibhedi ezingatshatanga Ngokunokwenzeka kokujoyina kunye nokuba yibhedi ephindwe kabini. Inika undwendwe zonke izibonelelo zendawo yokuhlala exhotyiswe ngokupheleleyo. Kwigumbi lokuhlala elincinci le-balcony undwendwe lunokonwabela ukutya okanye isiselo senkampani enombala oluhlaza okwesibhakabhaka ongapheliyo wolwandle kunye nesibhakabhaka.
Indawo yokuhlala inceda undwendwe ukuba lukonwabele ukuhambahamba esixekweni. Isikwere esiphambili kukuhamba kwemizuzu emi-5 kwaye ichibi elihle laseAgios Nikolaos likumgama wemizuzu emi-2 kuphela. Kulo mmandla kukho iikhefi ezininzi kunye neeresityu ezinokonwabela iincasa zasekhaya nezingezizo ezendawo.
Kufuphi nefulethi kwaye kumgama omalunga neemitha ezingama-800 kukho iilwandle ezimbini ezicwangcisiweyo ezinikezelwe ngeBlue Flag (ulwandle lwaseAmmoudi kunye nolwandle lwaseKitroplateia). Kwiimitha ezingama-300 kukho ulwandle oluncinci olungacwangciswanga.
Kwisitrato esingezantsi kwendlu uya kufumana iikhefi, iindawo zokutyela, iivenkile zabakhenkethi kunye neevenkile ezinkulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Irini
Ndiza kufumaneka kwimibuzo yakho yonke imihla ukusuka ngo-15:00 ukuya ku-22:00.
Inombolo yomthetho: 00000605899